3 Jọshụa wee bilie n’isi ụtụtụ, ya na ụmụ Izrel niile wee si na Shitim+ kwalie bịarute Jọdan; ha wee rahụ n’ebe ahụ tupu ha agafee.
2 O wee ruo na mgbe ụbọchị atọ gasịrị,+ ndị isi+ gagharịrị n’ebe ha mara ụlọikwuu
3 wee nye mmadụ niile iwu, sị: “Ozugbo unu hụrụ igbe ọgbụgba ndụ Jehova bụ́ Chineke unu, na ndị nchụàjà, bụ́ ndị Livaị, ndị bu ya,+ unu ga-esi n’ebe unu nọ kwalie, unu ga-esokwa ya n’azụ.
4 Naanị ka ohere nke dị ihe dị ka puku kubit abụọ dịrị n’agbata unu na ya;+ unu agala ya nso, ka unu wee mara ụzọ unu ga-esi gawa, n’ihi na unu esibeghị ụzọ ahụ mbụ.”
5 Jọshụa wee sị ìgwè mmadụ ahụ: “Doonụ onwe unu nsọ,+ n’ihi na echi, Jehova ga-eme ihe dị ebube n’etiti unu.”+
6 Jọshụa wee gwa ndị nchụàjà, sị: “Burunụ igbe ọgbụgba ndụ+ ahụ butere ndị Izrel ụzọ.” Ha wee buru igbe ọgbụgba ndụ ahụ wee butere ha ụzọ.
7 Jehova wee sị Jọshụa: “Taa, m ga-ebido ime ka ị dị ukwuu n’anya Izrel dum,+ ka ha wee mara na dị nnọọ ka m nọnyeere Mozis,+ m ga-anọnyere gị.+
8 Gị onwe gị ga-enye ndị nchụàjà bu igbe ọgbụgba ndụ ahụ iwu,+ sị, ‘Ozugbo unu rutere n’ọnụ ọnụ mmiri Jọdan, unu ga-akwụrụ+ otu ebe na Jọdan.’”
9 Jọshụa wee gwa ụmụ Izrel, sị: “Bịanụ ebe a gee ntị n’okwu Jehova bụ́ Chineke unu.”
10 E mesịa, Jọshụa sịrị: “Ọ bụ nke a ka unu ga-eji mata na Chineke dị ndụ nọ n’etiti unu,+ nakwa na ọ ghaghị ịchụpụ ndị Kenan na ndị Het na ndị Haịvaịt na ndị Perizaịt na ndị Gegash na ndị Amọraịt na ndị Jibọs+ n’ihu unu.
11 Lee! Igbe ọgbụgba ndụ nke Onyenwe ụwa dum na-aga n’ihu unu ka ọ banye Jọdan.
12 Ma ugbu a, họrọnụ ndị ikom iri na abụọ n’ebo niile nke Izrel, otu onye ga-anọchite anya otu ebo.+
13 Ọ ga-erukwa na ozugbo ọbụ ụkwụ ndị nchụàjà, ndị bu igbe Jehova, bụ́ Onyenwe ụwa dum, zọsara mmiri Jọdan, a ga-egbochi mmiri Jọdan, bụ́ mmiri nke si n’ebe mgbago na-asọdata, ọ ga-eguzokwa otu ebe dị ka mmiri e gbochiri egbochi.”+
14 O wee ruo na mgbe ụmụ Izrel si n’ụlọikwuu ha kwalie tupu ha agafee Jọdan, ndị nchụàjà bu igbe ọgbụgba ndụ+ ahụ buteere ha ụzọ,
15 ozugbo ndị bu Igbe ahụ bịarutere Jọdan, ụkwụ ndị nchụàjà bụ́ ndị bu Igbe ahụ azọnyekwa n’ọnụ ọnụ mmiri (mmiri Jọdan na-etochi akụkụ ya niile+ n’ụbọchị niile n’oge owuwe ihe ubi),
16 mmiri nke na-esi n’ebe mgbago asọdata wee guzoro otu ebe. O toro dị ka mmiri e gbochiri egbochi+ ruo n’Adam bụ́ ebe dị anya, bụ́ obodo dị n’akụkụ Zaretan,+ ebe nke na-asọga n’oké osimiri Araba, bụ́ Oké Osimiri Nnu,+ takọrọ. E gbochiri ya, ụmụ Izrel wee si n’ihu Jeriko gafee.
17 Ka ọ dị mgbe ahụ, ndị nchụàjà bụ́ ndị bu igbe ọgbụgba ndụ Jehova kwụụrụ n’ala akọrọ+ n’etiti Jọdan, ka Izrel dum nọ na-agafere n’ala akọrọ,+ ruo mgbe mba ahụ dum gafesịrị Jọdan.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D6%26Chapter%3D3%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl